दानी डा. उपेन्द्र | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मेरो व्यवसाय
छोरी लिन भक्तपुरको गल्ली नम्बर ३ मा आउनु →
महतो एनआरएनका प्रमुख संरक्षक एवम् उक्त ट्रष्टका अध्यक्ष हुन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरु (एनआरएन)को छैटौं क्षेत्रीय सम्मेलन रुसी महासंघको राजधानी मस्कोमा भएको हो । दुईदिने सम्मेलनमा यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकबाट आएका तीनसय भन्दा बढी नेपाली नागरिक र नेपालीभाषीको सहभागिता छ ।
डा. उपेन्द्र मल्टिनेसनल कम्पनीका मल्टिविलेनियर हुन् । उनको सबैभन्दा ठूलो लगानी रुसमा छ, त्यसपछि बेलारुसमा । नेपालमा उपेन्द्रको ठूलो लगानी ‘स्पाइस नेपाल’ मा छ, युरोपेली कम्पनी टेलियासोरेनामा लगानी गरेका उपेन्द्रले ‘स्पाइस नेपालमा पनिटे लियासोरेनाको लगानी भित्र्याएका छन् । त्यसबाहेक सानिमा विकास बैंक, सानिमा हाइड्रोपावर, स्टेन्डर्ड फाइनान्स, एक्मी कलेज अफ इन्जिनियरिङ,कान्तिपुर टेलिभिजन, शिखर इन्सुरेन्स, मेडिकेयर हस्पिटललगायतका संस्थामाउनको व्यावसायिक लगानी छ ।
त्यसो तउपेन्द्रले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि खोलिएको कम्पनीको स्वामित्व पनि आफ्नो नाममा लिएका छन् । उनी यही कम्पनीबाट काठमाडौं-हेटौंडा वा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छन्, जसका लागि उनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन् ।
मस्कोमा उनले सबैभन्दा ठूलो लगानी रियलस्टेट र विद्युतीय उपकरण उत्पादन कम्पनीमा गरेका छन् भने बेलारुसमा उनले हेभी इक्युपमेन्ट उत्पादन, स्वास्थ्य, बैंक, कृषि, वन र तेल उत्खनन्मा लगानी गरेका छन् ।
रुसमा उपेन्द्रले एमटिजेड (मस्को टेलिभिजन प्लान्ट) रुविनमा लगानी गरेका छन्, यो रुसको सबैभन्दा पुरानो टेलिभिजन सेट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो ।
त्यसबाहेक रियलस्टेट कम्पनी रुविनमा पनि उपेन्द्र महतोको लगानी छ । रुविनले मस्कोमा ‘बिजनेस सेन्टर रुविन’ निर्माण गरेको छ, रेस्टुरेन्ट, सम्मेलन केन्द्र, व्यापारिक स्थल भएको यो सेन्टर मस्कोको व्यापारिक केन्द्र पनि हो ।
त्यसैगरी,बुहउद्देश्यीय व्यापारिक कम्प्लेक्स फिलीओनमा पनि रुविनको स्वामित्व छ । तीन दशमलव ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कम्प्लेक्समा चारतले सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन हललगायत १५ सय गाडी अट्ने पार्किङ सुविधा छ ।
रुविनको स्वामित्वमा होटल एन्ड बिजनेस सेन्टर पनि निर्माणधिन छ, यो सेन्टरमा २५तला, १३ तला र ६ तलाको होटल रहनेछ भने तीनतले भूमिगत पार्किङ पनि हुनेछ । त्यस्तै रुविनको स्वामित्वमा मस्कोमै ‘वेस्ट साइड’ र ‘इजोमरुद’ नाम गरेकादुइटा आवासीय कम्प्लेक्स पनि छन् । २४ तलाको वेस्ट साइड आवासीय कम्प्लेक्समा २ सय १९ अपार्टमेन्ट छन् भने इजोमरुदमा एक सय अपार्टमेन्टछन् ।
यतिमात्र होइन, रुविनसँग मस्कोको ‘टिसी गोर्वुस्किन द्भोर’ सपिङ मलकोस्वामित्व पनि छ । युरोपको सम्भवत सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय तथा घरायसीसामग्री बिक्री गर्ने यो मलमा ६० हजार स्क्वायर मिटरको क्षेत्रफल छ । योमलमा महिनामा १५ देखि २० लाख उपभोक्ता पुग्ने गर्छन् ।
उपेन्द्रकोबेलारुसमा पनि ठूलै लगानी छ, बेलारुसका अवैतनिक नेपाली दूतसमेत रहेका उपेन्द्रको बेलारुसको लगानी भाइहरू डा. वीरेन्द्र महतो र सुरेन्द्र महतोले पनि हेर्ने गर्छन् ।
उपेन्द्रको लगानी डोजर, क्रेनजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी ‘अम्कोडर’मा छ भने महतो परिवारले बेलारुसमा क्राभिरा’ अस्पताल पनि सञ्चालन गर्छन् । क्राभिराले बेलारुसमा औषधि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि काम गर्न खोजिरहेको छ ।
यसैगरी, उपेन्द्रको लगानी बेलारुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक अल्फा बैंकमा पनि छ । त्यसबाहेक उपेन्द्रको लगानी पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री गर्ने कम्पनीमा पनि छ । मल्टिनेसनल मल्टिविलिनियर उपेन्द्रको यो सबै लगानी न त घरानियाँ हो, न त चिठ्ठामा नै पाएका हुन् । यो सबै लगानी महतोको मिहिनेत, समर्पण र इमानदारीको प्रतिफल हो ।
सिराहा कर्जनहामा साधारण किसान परिवारमा जन्मेका उपेन्द्रले त्यहीँ विद्यालयस्तरको शिक्षा पूरा गरेका थिए भने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका थिए ।
ओभरसियर पास गरेपछि एक वर्ष सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका उपेन्द्रले कामगर्दा-गर्दै तत्कालीन सोभियत संघमा पढ्नका लागि छात्रवृत्ति पाएर रुसपुगेका थिए, जहाँ उनले जलविद्युत्मा एमई र पछि पिएचडी गरे ।
ठीकत्यसैबेलामा सोभियत संघमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भयो, जब सत्तामा ग्लास्तनस र प्रेस्त्रोइस्का आए, १९८८/८९ तिर अर्थतन्त्र अझ खुल्ला भयो । विदेशीले पनि व्यापार गर्न थाले, मौकाको फाइदा उठाउँदै एक हजार डलर जम्मागरेर उपेन्द्रले पनि व्यापार थाले ।
महतोले साथीहरूसँगै सुरुमा रुसबाहिरबाट टेलिभिजन, विद्युतीय सामग्री ल्याएर रुसमा बिक्री गर्न थाले अनि विस्तारै रुसमै विद्युतीय सामग्री उत्पादन र बिक्रीगरे । त्यसपछि रियलस्टेट हुँदै महतोले विभिन्न परियोजनामा लगानी बढाए ।
स्थानीय प्रोफेसर तथा व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका महतोले उनीहरूकै सल्लाह र सहयोगमा तेल व्यवसाय पनि सुरु गरे । बेलारुसमा भएका तेलखानीबाट तेल निकालेर प्रशोधन गर्दै निर्यात गर्ने काम उनको मुख्य व्यवसाय बन्यो ।
जोखिम वहन गर्ने सोचका साथ व्यावसायिक दुनियाँमा होमिएका महतोको व्यवसाय विस्तारै फस्टायो ।//
उपेन्द्रजति धनी छन्, उत्तिकै दानी पनि छन् । गैरआवासीय नेपाली (नआरएन)कानिवर्तमान अध्यक्ष उपेन्द्रले गतवर्ष मात्रै पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीदान गरे । एनआरएन सम्मेलनताका उनले क्रियापुत्री भवन बनाउन थप तीन करोडरुपैयाँ दिए, यसअघि क्रियापुत्रीभवन बनाउन महतोले एक करोड २५ लाख रुपैयाँआर्थिक सहयोग गरेका थिए । उनले समता शिक्षा निकेतनलाई नेपालको नौ जिल्लामाविस्तार गर्न तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ पनि प्रदान गरे ।
आमा फुलकुमारी महतोको नाममा ट्रस्ट खडा गरेका छन् । उपेन्द्रले यही ट्रष्टकानामबाट करिब २२ करोड रुपैयाँ सामाजिक परोपकारी काममा दान दिएका छन् ।
उपेन्द्रले आफू जन्मेको स्थानमा अस्पताल बनाएका छन्, सामाजिक कार्यक्रमका लागिभवन, देवघाटमा वृद्धाश्रम बनाउन पनि सहयोग गरेका छन् ।
योबाहेक सामाजिक कार्यमा संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि उपेन्द्रले सहयोग दिँदै आएका छन् । मुख्यगरी उनी संस्कृति संरक्षण गरेर भावी सन्ततीलाई सहीमार्ग देखाउन चाहन्छन् । ‘हाम्रो संस्कृति संरक्षण गर्न सकेनौँ भने सन्ततीहरू पूर्णतया पश्चिमेली बन्न पुग्छन्, जसलाई हामी पचाउन सक्नेछैनौँ, त्यसैले मलाई चिन्तित पार्छ, अनि त्यस्तो क्षेत्रमा सहयोग गर्छु,’ उनले भने ।
उपेन्द्रले आफ्नो कम्पनीको मुख्य स्थानमा नेपालीलाई नै स्थान दिएका छन्, यसले गर्दा उपेन्द्रका कम्पनीमा नेपालीप्रतिको आदर उच्च छ । ‘म बेलारुसमा बस्ने भएपनि नेपाली संस्कृतिलाई जोगाएको छु, हामीले नेपाली नयाँ वर्ष, दसैँ, होली आदि भव्य रूपमा मनाउने गरेका छौँ, नेपालको जस्तै वातावरणमा मनाइने चाडपर्वले उपेन्द्रलाई बेलारुसमा पनि नेपालकै झझल्को दिने गरेको छ । हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीलाई पनि नेपाली चाडपर्व’bout थाहा छ, उनीहरू पनि यसैमा रमाउँछन्, यसले नेपालप्रतिको माया र चासो बढाएको पनि छ ।
विद्यालयमा अंग्रेजी, फ्रेन्च, रसियन भाषा सिक्ने उपेन्द्रका दुई छोरी र एक छोरा घरमा नेपाली सिक्छन्, नेपाली खाना खान्छन्, नेपाली खाना बनाउन उनले नेपाली कुकलाई बेलारुस लगेकाछन् । उपेन्द्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउने योजना बनाएका छन्, उनको चाहना छ, ती अस्पताल केही अर्धव्यावसायिक र केही समाजसेवाका लागि हुनेछन् ।
// // Posted: Raju Gurung